I-Generator Factory | Abakhiqizi beGeneretha Yegesi yaseChina, Abahlinzeki
Isethi yejeneretha yegesi yemvelo ifanele ukusebenza ezinhlobonhlobo zezimo zemvelo eziningi, futhi ukusebenza kwayo komnotho kungcono kunokwenjini ekhona ye-diesel; Iyunithi ingaphendula ngokushesha ezinguqukweni zokulayisha futhi ibhekane nezimo eziyinkimbinkimbi.
1000kw ,2 Megawat Generator Generator Igesi Yemvelo
Umsebenzi Isingeniso Isethi yejeneretha yegesi yakhiwe injini yegesi, ijeneretha, ikhabhinethi yokulawula nezinye izakhi. Injini yegesi kanye nejeneretha kufakwe ku-chassis yensimbi efanayo. Lolu phiko lusebenzisa igesi yemvelo, igesi ehambisana nomlomo, igesi yezimayini zamalahle, igesi yamanzi, ukucwenga kanye negesi yomsila wamakhemikhali, i-biogas, igesi ye-coke oven, i-blast furnace gas namanye amagesi avuthayo njengophethiloli. Iqala ngokushesha futhi inomnotho omuhle. Ikakhulukazi ngenxa yesidingo sezinga eliphezulu lempilo yasemadolobheni, ijeneretha ebaselwa ngegesi...
I-genset yegesi evimbela umsindo kanye nejeneretha yegesi yemvelo
Amandla amajeneretha asebenza ngegesi eyodwa asukela ku-250KW kuya ku-1500kW, futhi ukukhiqizwa kwamandla ka-1.5MW kuya ku-8 MW nangaphezulu kungabonakala. Noma iyiphi inhlanganisela yamamodi ahambisanayo ingahlangabezana nezidingo ezihlukene zokuphehla amandla.
Amasethi ejeneretha yegesi (awazi nangokuthi I-Generetha Yenjini Yegesi) anezinzuzo zobubanzi bamandla okukhipha okubanzi, ukuqala nokusebenza okuthembekile, ikhwalithi enhle yokuphehla amandla, isisindo esilula, ivolumu encane, ukugcinwa okulula nomsindo ovela kancane. Ngokuvamile, banalezi zinzuzo ezine ezilandelayo:
Iyunithi Yejeneretha Yegesi
Sikhethekile ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwejeneretha yegesi esethelwe isigaba samandla amaningi kanye nezicelo zezimboni eziningi. Amandla eyunithi eyodwa asuka ku-250KW kuya ku-1500kW, kanye nokuphehla kukagesi okungu-1.5MW kuya ku-8 MW nangaphezulu kungabonakala. Noma iyiphi inhlanganisela yamamodi ahambisanayo ingahlangabezana nezidingo ezihlukene zokuphehla amandla.
500KW 1MW 2MW Isethi yokuphehla igesi
I-Sichuan Rongteng automation equipment Co., Ltd. ikhethekile ku-R&D, ukuklama nokukhiqizwa kwejeneretha yegesi yemvelo. Amandla eyunithi eyodwa asuka ku-250KW kuya ku-1500kW, kanye nokuphehla kukagesi okungu-1.5MW kuya ku-8 MW nangaphezulu kungabonakala. Noma iyiphi inhlanganisela yamamodi ahambisanayo ingahlangabezana nezidingo ezihlukene zokuphehla amandla.